UNomvethe uthipha uLorch kweyePSL
UTHEMBINKOSI Lorch we-Orlando Pirates usethubeni lokuwina umklomeli kumaPSL Awards e-ICC eThekwini, ngeSonto ebusuku
NDUDUZO DLADLA | May 14, 2019
INKUNZI emdwayidwa esanda kuwagaxa emgibeni amakhokho, uSiyabonga “Bhele” Nomvethe, ithwele ngeqoma umdlali we-Orlando Pirates, uThembinkosi Lorch, ukuthi uzokhala emuke nomklomelo i-PSL Footballer of the Season.
UNomvethe, owunqobe kabili umklomelo (esadlalela iKaizer Chiefs nakwiMoroka Swallows), uthe ukuzinikela nokusebenza kanzima kukaLorch yikona okumenza ehluke kuThemba Zwane noHlompho Kekana abadlalela iMamelodi Sundowns, aqokwe nabo emunxeni ofanayo.
I-Premier Soccer League (PSL) ikhiphe uhlu lwabakhethiwe izolo e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini.
Umcimbi wokuqhela abenze kahle kule sizini kwiPSL uzoba khona e-ICC ngeSonto ngo-7 ebusuku.
“Iqiniso wukuthi kunzima ukusho ukuthi ngubani okumele ahlabane ngomklomelo ngoba badlalile bonke abadlali abakhethiwe. Kodwa ngokwami ngingakhetha uLorch ngoba udlalile kakhulu futhi uzinikelile kakhulu. Ukusebenza kanzima nokungapheli umoya ngibona ukuthi yikona okumenza ehluke kuZwane noKekana.”